Google I / O 2019 ကိုမေ ၇ ရက်မှ ၉ ရက်အထိကျင်းပမည်ဖြစ်သည် Androidsis
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကဲ့သို့ပင် Google သည်သုံးစွဲသူများအတွက်ပဟေgameိဂိမ်းတစ်ခုကိုစီစဉ်ခဲ့သည် သူတို့သည် Google I / O 2019 ကျင်းပမည့်နေ့ရက်များကိုခန့်မှန်းနိုင်ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Mountan View ကုမ္ပဏီ၏နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံကိုကျင်းပမည့်နေ့ရက်များကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီမှအသစ်အဆန်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောဖြစ်ရပ်တစ်ခု။
ရက်စွဲများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌များစွာသောအပြောင်းအလဲများမရှိပါ အခြားအနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတခုကဒီ Google I / O 2019 ကိုမေလပထမပတ်မှာစည်းရုံးတယ်။ ဒီသဘောနဲ့ငါတို့ပြီးသားတစ်ခုခု။
Google I / O 2019 ကိုမေ ၇ ရက်မှာစတင်မည် နှင့်မေလ9အထိပြေးပါလိမ့်မယ်။ ဤသုံးရက်တာကာလ၌ကုမ္ပဏီမှသတင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်မျှော်နေပါသည်။ လူတိုင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ညီလာခံရှိပေမယ့်။ လူတိုင်း Android Q. သတင်းကိုစောင့်မျှော်နေကြသောကြောင့်ပုံမှန်အတိုင်းပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ထို operating system ၌အရင် version ကိုပြလိမ့်မည်။
ဒီရက်သတ္တပတ်တွေမှာငါတို့သွားပြီ ပြီးသားအချို့ပေါက်ကြားလာမယ့် ကြောင်းသတင်းအကြောင်း ကို Android Q တွင်မိတ်ဆက်မည်မျှော်လင့်ထားတဲ့ဇာတိအမှောင်စနစ်လိုပဲ။ သုံးစွဲသူများစွာမျှော်လင့်သည့်အရာ၊ android အပေါ်နေထိုင်ခဲ့သည် မင်းစကတည်းက
ဤ Google I / O 2019. တွင်ကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာမဟုတ်ပါ။ လက်ထောက်အကြောင်းကိုသတင်းရှိပါတယ်ဂူဂဲလ်ဓါတ်ပုံကဲ့သို့သောအခြားအပလီကေးရှင်းများအပြင်။ ရက်သတ္တပတ်များကုန်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှဤအဖြစ်အပျက်တွင်တင်ပြမည့်သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်လိမ့်မည်။
ထိုကွောငျ့, မေလ ၇ ရက်မှ ၉ ရက်အထိရက်ချိန်းယူတယ် ဤ Google I / O 2019. ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှဤအဖြစ်အပျက်တွင်တင်ပြမည့်သတင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံရောက်ရှိမည့်သတင်းများကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မည်။ သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးထုတ်လုပ်ရန်သေချာပါသည်ကတည်းက။ ပွဲမှာဘာကိုတွေ့မြင်ဖို့မျှော်လင့်သလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Google I / O 2019 မှာအတည်ပြုပြီးတဲ့နေ့စွဲပါ